केन्द्राध्यक्षको लापरबाहीले विद्यार्थीको लक्ष्य नै चौपट ! - Everest Dainik - News from Nepal
केन्द्राध्यक्षको लापरबाहीले विद्यार्थीको लक्ष्य नै चौपट !
कञ्चनपुर, साउन १८ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा १२ को परीक्षा गत बैशाखमा भयो । जसको नतिजा केही दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक भएको छ । देशका हजारौँ केन्द्रबाट कक्षा १२ को परीक्षामा लाखौँको संख्यामा विद्यार्थीहरु सहभागी भए ।
स्वभावित रुपमाः परीक्षा दिएपछि विद्यार्थीहरुमा कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कौतुहतता हुन्छ । कक्षा १२ को परीक्षा उर्तिण गरेपछि उच्च शिक्षा पढेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने ब्यग्र प्रतिक्षामा विद्यार्थी हुन्छन् । उसो त, परीक्षा दिएका विद्यार्थी आफ्नो नतिजाको प्रतिक्षामा रहन्छ । त्यसमध्ये कोहीले सोचे जस्तो नतिजा पाउन सक्दैनन् । कोही सोचे भन्दा राम्रो नतिजा निकाल्दछन् ।
नतिजा राम्रो आएका विद्यार्थी निकै दंग हुन्छन् , किन कि उनिहरु आफ्नो लक्ष्य प्राप्तीको एक खुड्किलो माथी पुगेका हुन्छन् । राम्रो नतिजा नलिएर विद्यार्थीहरु भने निकै तनावमा हुन्छन् । यसको अर्थ विद्यार्थीहरु नतिजालाई लिएर निकै सोचमा हुन्छन् , किन कि नतिजासंग उनिहरुको जीवनको लक्ष्य जोडिएको हुन्छन् । एक बर्षको आहात मेहनतले परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको नतिजा बिग्रीयो भने उनिहरुलाई कस्तो होला ? सोचौँ त ।
आफुले नै परीक्षामा सहभागी नभएर नतिजा नआउनु त अर्को कुरा भयो । तर एक बर्षको मेहनतले दिएको परीक्षामा केन्द्राध्यक्षको लापर्बाहीले दिएको उत्तर पुस्तिका नै गायब पारिएपछि नतिजाको पर्खाइमा रहेको विद्यार्थीलाई कस्तो होला ? सोच्नै नसकिने अवस्था छ । कञ्चनपुरमा एउटा यस्तै घटना घटेको छ । महेन्द्रनगरस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय (साधारण) मा अध्ययनरत इन्दु धामीसँग यस्तो घटना घटेको छ ।
महेन्द्रनगरको बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा उनको परीक्षा केन्द्र परेको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको कक्षा १२ को परीक्षामा इन्दु पनि सहभागी थिइन् । उनि महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालय साधारणमा बिज्ञान बिषय लिएर आफ्नो पढाइ गरिरहेकी थिइन् । उनले बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट पहिलो, दोस्रो दिन परीक्षा दिइन् । तेस्रो दिनको परीक्षा उनको रसायन शास्त्रको रहेको थियो । उनी उक्त केन्द्रबाट सबै बिषयको परीक्षामा सहभागी भइन् ।
कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएकी इन्दु नतिजाको प्रतिक्षामा थिइन । यसैमा उनको नतिजा पनि सार्वजनिक हुन्छ । राम्रै नतिजा ल्याएर माध्यमिक शिक्षा पुरा गरी आफ्नो जीवनको लक्ष्य प्राप्तीको खुड्किला माथी जाने योजनामा रहेकी इन्दुलाई नतिजाले काल्पनिक भविष्यबाट एकै छिनमा भुइँमा पछारिदिन्छ । उनको परीक्षा नतिजा नराम्रो आएको होइन ।
सबै बिषयको परीक्षामा सहभागी भएकी इन्दुलाई ठुलो बज्रपात पर्यो । उनको नतिजामा पास वा फेल आएन की बरु परीक्षा रद्ध गरिएको आयो । पुरै बिषयमा सहभागी भएकी इन्दुको यस्तो नतिजा आउनुको मुख्य जड केन्द्राध्यक्ष, सह–केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक हुन । उनीहरुको लापर्बाहीले इन्दुको एक बर्ष खेर गएको छ । बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका केन्द्राध्यक्ष टपेन्द्र भट्ट र निरीक्षक रामसिंह भण्डारी लगायत परीक्षा नियन्त्रकका जिम्मेवार व्यक्तिको लापर्बाहीले गर्दा इन्दुको रसायनशास्त्रको उत्तरपुस्तिका हराएर नजिता नै पुरै बिग्रीएर एक बर्ष खेर गएको छ ।
‘परीक्षा दिएको रसायनशास्त्रको कपी नै हराएको छ ।’ इन्दुले भनिन्, ‘केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक लगायतको लापर्बाहीले गर्दा एक बर्ष खेर गयो । मैले दिएका परीक्षा नै रद्ध भयो ।’
केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकको यस्तो लापर्बाही
इन्दुको रसायनशास्त्रको परीक्षाको दिन परीक्षा केन्द्रको कक्षामा ७ जना रसायनशास्त्र र २२ जना अर्थशास्त्र बिषयका परीक्षार्थी थिए । उनले पनि रसायनशास्त्रको परीक्षा दिइन् । तर उनको उत्तरपुस्तिका केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सह–केन्द्राध्यक्ष कसैले पनि भेटाएनन् । पछि इन्दुले उत्तरपुस्तिका घर लगेको भन्दै उनिहरुले हचुवाको भरमा मुचुल्का तयार पारेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पठाए ।
जसमा केन्द्राध्यक्ष, सहकेन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक , प्रहरीको सहभागी रहेको थियो । उत्तरपुस्तिका घर लगेको खण्डमा पुरै बिषयको परीक्षा रद्ध गरिएको मानिने र अर्को बर्ष परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका केन्द्राध्यक्ष टपेन्द्र भट्ट, निरीक्षक रामसिंह भण्डारी लगायत परीक्षा नियन्त्रक संयन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले भने चरम लापर्बाही गरेका छन् । इन्दुको उत्तरपुस्तिका नपाएपछि उनि तथा उनको विद्यालयलाई खबर गर्नुको सट्टा केन्द्राध्यक्ष भट्ट र निरीक्षक भण्डारी लगायत अन्य परीक्षा नियन्त्रक संयन्त्रका कर्मचारीहरुले भने त्यो कुरालाई वेवास्ता गर्दै हचुवाका भरमा मुचुल्का उठाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलबाड गरेका छन् ।
उत्तरपुस्तिका घर लगेको बनाए पुरै परीक्षा नै रद्ध हुने प्रावधानका बिज्ञ रहेका ती प्राज्ञहरुले आफ्नो वुद्धि नै गुमाएर काम गरेको देखिन्छ । रसायनशास्त्रको उत्तरपुस्तिका गायब भएपछि अन्य बिषयको परीक्षामा सामेल नहुनदिनु पर्ने तथा खबर गर्नु पर्ने भएपनि केन्द्राधयक्ष, निरीक्षकले भने केही नगरेको इन्दुले बताइन ।
‘उत्तरपुस्तिका घर लगेको मुचुल्का बनाए, परीक्षा रद्ध भएर एक बर्ष खेर गयो । विद्यालय तथा मलाई पनि खबर गरेनन् । उनले भनिन्, ‘अनय विषयमा पनि सामेल हुन नदिनु प¥थयो ।’
वि.स. २०७१ सालमा लालमणी पाण्डेय प्रधानाध्यापक रहेको बेला समेत बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा एक परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएको थियो । त्यस बखत प्रधानाध्यापक लालमणी पाण्डेयलाई लापर्बाही गर्दै विद्यार्थीको जीवनमाथी खेलबाड गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले कालोमोसो दलेर बजार परिक्रम गराएका थिए । त्यस बेला भने उत्तरपुस्तिका हराएका आदर्शका विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई सो बारे जानकारी गराएको थियो । सोही घटनाबाट प्रताडित भएर हालका नेतृत्वपङ्तिले समेत इन्दुको घटना बाहिर नल्याएको एक पक्षको तर्क छ ।
आफ्नो छोरीको नजिताका बारे परीक्षा केन्द्र रहेको बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा जानकारी लिँदा इन्दु र उनकी आमालाई शिक्षकले हप्काएका छन् । छोरीको नतिजाका बारे के हुन्छ भनेर बुझदा बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मण भट्टले हप्काएको इन्दुले बताइन ।‘यो हामीसंग सम्बन्धित होइन, तपाईहरु बाहिर जानुस् भनेर हामीलाई हप्काउने काम भयो । ’उनले भने, ‘आफैले गल्ति गर्ने, अनि बुझ्न खोज्दा पनि हप्काइ खाइयो ।’
इन्दुको परीक्षा रद्ध हुनुमा विद्यालय प्रशासन दोषि नभएर राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डले नै कमजोरी गरेको दाबी विद्यालय प्रशासनको रहेको छ । ‘हाम्रोबाट केही गल्ति भएको छैन । यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कै कमजोरी हो ।’ एक जना शिक्षकले भने । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: इन्दु धामी, केन्द्राध्यक्ष, लक्ष्य, लापरबाही